ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူရခြင်း အကျိုးတရား (၇) မျိုး…….. – GuGuGarGar
ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူရခြင်း အကျိုးတရား (၇) မျိုး……..
Shwe | July 3, 2020 | Knowledge | No Comments
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် တို့၏ ဝါတွင်း ကာလ နီးလာပြီ ဖစ်လို့ ဝါဆို သင်္ကန်းကပ် လှူဒါန်း လျင် ရရှိနိုင်သည့် ကောင်းကျိုး တွေကို ရေးသား၍ ဓမ္မဒါန ပြုလိုက်ပါတယ်…..
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့သည် ဝါတွင်းအခါ ကာလမှာ နီးစပ်ရာ သံဃာတော်များသီတင်း သုံးရာကျောင်းတိုက်တို့မှာ အဖွဲ့အစည်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မိသားစု ဖြင့်လည်းကောင်း ၊တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲသော် လည်းကောင်း…..
ကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာတော် များအား ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူဒါန်းလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ထိုသို့ သံဃာတော် များအား မိမိတို့၏ ချွေးနည်းစာဖြင့် ဝါဆို သင်္ကန်းများ ကပ်လှူဒါန် သည့်အခါ…….
ထိုအလှူကို အကြောင်းပြု၍ ကောင်းကျိုးတွေ ဘယ်လောက် ရသလဲ ဆိုတာသိရင် မိမိတို့၏ အလှူဒါနအပေါ်မှာ ပိုပြီး တော့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်…..ပို၍လည်း အကျိုးပေး ထက် သန်ပါတယ်။ ဒါမို့ကြောင့် ဝါဆို သင်္ကန်းပေး လှူဒါန်း ရသဖြင့် မိမိတို့ရရှိနိုင်သည့် ကောင်းကျိုးတရား များကို တစ်ခုချင်းစီ သိထားသင့် ပါတယ်……
သံဃာတော်တို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် လှူဒါန်း သူတို့သည် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်မပြုခင် စပ်ကြား ဘဝသံသရာမှာ ကျင်လည်သမျှ ဘဝတွေ မှာ လူချမ်းသာ၊ နတ်ချမ်းသာ တွေဖြစ်၍ ကောင်းကျိုးတရား (၇)ပါးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်……
(၁) အဝတ်၊ အထည်အတွက် စိုးရိမ်မှုတွေကင်းခြင်း ဆိုတဲ့ အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
(၂) ရုပ်ဆင်း အင်္ဂါပြည့်စုံ ညီညာ၍ ရွှေရောင်အဆင်း ဖြင့် တင့်တယ်လှပခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရားကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
(၃) ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမှာ မီးမထွန်း ဘဲလင်းတဲ့ ပပဝတီမင်းသမီးလေးလို ခန္ဓာကိုယ်မှ အရောင် လင်းခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရား ကိုရရှိနိုင် ပါတယ်။
(၄) အသားအရေ နုညပ်ချောမွေ့ပြီးတော့ သူမတူ အောင် ချောမော လှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုး တရားကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
(၅) မျက်နှာ အစရှိသည့် ခန္ဓာကိုအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တို့မှာ မှည့်ခြောက်၊ တင်းတိတ်၊ ဝက်ခြံအစရှိသည် များ လုံးဝကင်းရှင်းပြီးတော့ ခေတ်ပေါ်အလှပြင် ပစ္စည်းတို့ဖြင့် လုံးဝ လိမ်းခြယ်ခြင်းမပြုရဘဲ နဂိုပင်ကို သဘာဝ အလှပိုင်ရှင်များဖြစ်နိုင်ခြင်း အကျိုးကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
(၆) ခေတ်ကာလလျောက် ပေါ်ပေါက် လာသည့် အဝတ်အထည်တို့ကို မိမိတို့စိတ်ထဲက အခုပေါ်နေ တဲ့ အဝတ်ထည်းလေး ဝတ်ချင်လိုက်တာလို့ စိတ်ထဲ ကတောင်တလိုက်ရုံလေးနဲ့ ထိုအဝတ်အထည်တို့ သည် မိမိထံသို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်က လက်ဆောင် ပေးလို့သော်လည်းကောင်း….. ဝယ်ပေးလို့သော် လည်းကောင်း၊ ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် မိမိလက်သို့ရောက်ရှိ လာနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါ ဖော်ပြခဲ့သည့် ကောင်းကျိုးတရားတို့ သည် လောကီကောင်းကျိုး ချမ်းသာများသာဖြစ်၏။ လောကုတ္တရာကောင်းကျိူးချမ်းသာများ မဟုတ်ပါ…..
(၇) ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်ဖူးသူ အလှူရှင်သည် ဘဝ သံသရာ တစ်ကွေ့မှာ အကယ်၍များ ဘုရားတစ်ဆူဆြူ ဖင့်ကံအားလျော်စွာ တွေ့ကြုံဖူးမျှော်ခွင့်ရသည် ရှိသော် ထိုဘုရားရှင်သည် ဝါဆိုသင်္ကန်း လှူဒါန်းဖူးခဲ့ သော ကောင်းမှုရှင်ကို (ဧဟိ ဘိက္ခု)ခေါ် လိုက်ရုံဖြင့်…..ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဝတ်ဆင်ထားသည့် အဝတ် တို့သည် သူ့ အလိုလို ပျောက်ကွယ်၍ ရဟန်းအသွင်ဖြစ်ကာ ဧဟိဘိက္ခု ရဟန္တာကြီြး ဖစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ လောကုတ္တရာ ချမ်းသာ အကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်….
ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူဒါန်းခြင် ကုသိုလ်သည် အထက်ပါဖော်ပြခဲ့ သည့် လောကီးကောင်း ကျိုးချမ်းသာ ၊လောကုတ္တရာကောင်းကျိုး ချမ်းသာ အဖြာဖြာတို့ကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ် လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့သည်…..
ဝါတွင်းကာလ၌ မိမိတို့ စွမ်းနိုင်သလောက် နီးစပ်ရာ သံဃာတော်တို့ အား ဝါဆို သင်္ကန်းအလှူကို တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ မိသားစုဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အသင်းအဖွဲဖြင့်ဖြစ်စေ လှူဒါန်းကြပါလို့ တိုက်တွန်းနှိုဆော်ရင်း ဤဓမ္မစာစုလေးကို အဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်….
စိုးရိမ်မဲ့ကင်း၊ ရွှေဆင်းရုပ်တူ၊ ကိုယ်မူရောင်ထွက်၊ နုညပ်အသားရေ၊ မပေညစ်ကြေး၊ ကြံတွေးတောင်းတ အဝတ်ရရှိ၊
ဧဟိဘိက္ခု ၊ ခေါ်ပြုရဟန်း ၊ ကျွတ်တန်းဝင်ရ၊ ကျိုးသတ္တ(ခုနှစ်ဝ)၊ မှတ်ကြစီဝရံ။ ။
မှတ်ချက်… ကာလအလျောက် ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်း ရကျိုးဟု ရေးဖွဲ့ထားသော်လည်း ဘယ်အချိန် ဘယ် ကာလမှာ သံဃာတော်တို့အား သင်္ကန်းလှူလှူအထက် ဖော်ပြပါ ကောင်းကျိုး(၇)မျိုး ကို ရရှိသည်ဟု ဓမ္မ မိတ်ဆွေများမှတ်ပါလေ…..
နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ထားရချိန်မှာ သင့်မျက်မှန်ကို အခိုးရိုက်ပြီး ဝိုးတိုးဝါးတား မဖြစ်အောင် ဒီလိုလုပ်ထားပါ
အကြောပြတ်တာ ပျောက်စေတဲ့ သဘာဝ ဆေးနည်း
ချွေး ထွ က် လွန် ကဲပြီး မိမိ ခန္ဓာ ကိုယ် မှ အနံ့ အသက် မကောင်း ဘူး ဆို ရင်
နိုင်ငံကျော် ပြည်သူချစ် ဇာတ်မင်းသားကြီး ရွှေမန်းတင်မောင် ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း